China High Precision 32000 Series Mota Kubereka Taper Roller Kubereka Mugadziri uye Mutengesi | Kunmei
KM taper roller inotakura, iyo chinhu i100% chrome simbi, iyo mhete inofanirwa kuburikidza nekupisa kwekurapa, kuitira kuti hupenyu hunotakura hurefu, shandisa mune yakatsiga, iyo chaiyo yekutakura yakakwira.
Tapered roller mabheyari ane zvinhu zvina zvakakosha zvinosanganisira: iyo koni (yemukati mhete), iyo kapu (yekunze mhete), tapered rollers, uye keji (roller chengetedzo). Iyo koni, mukombe uye rollers anotakura mutoro nepo keji nzvimbo uye anochengetedza iwo anotenderera pane koni. Iyo koni, rollers uye keji zvinoriumba zveedu tapered roller mabheyaringi anonzi seye koni gungano. Yakazvimirira mukombe uye coni zvikamu zveedu tapered roller mabheyaringi anowanikwa pamwe negungano rakazara. Uye zvakare, Isu tinopa akasiyana masisitimu kune edu akapetwa roller mabheyari senge imwechete-mutsara, kaviri-mutsara.
Tapered roller mabheyaringi ane conical yemukati mhete uye yakatenderera mujaho, ine tapered rollers akarongedzwa pakati. Yese mitsara yekuratidzira pane yakasangana pamusoro inosangana panguva imwechete pane inobata axis. Iyi dhizaini inogadzira tapered roller mabhegi anonyanya kukodzera kutakura akabatanidzwa (radial uye axial) mitoro.
Kana iwe uchida kupa yako brand, ingonditumira yako package package.
Semuenzaniso wakasununguka kwauri kuti utarise mhando.
Kutarisira kubatana newe.
Tapered roller inotakura yekuparadzanisa inobereka, mhete yemukati ine roller uye keji yakaumbwa mukati mechinhu, chekunze chikamu, zvese mukati nekunze kwegungano zvinogona kuiswa chikamu. Zvinoenderana nekuumburuka kwemuviri kuumbana, kunogona kuita mhando iyi yemabheyari kuita mutsetse mumwe, wakapetwa kaviri uye wakakamurwa kuita akawanda makoramu.
Tapered roller mabheyaringi muhuwandu hukuru hwesere-mutsara tapered roller mabheyaringi. Diki mbiri mutsara tapered roller mabheyari anoshandiswa kumberi vhiri hub yemota. Mitsara mina-tapered roller mabheyaringi anoshandiswa mumachina anorema senge mahombe anotonhora uye anopisa.
● Ari akaparadzaniswa mabheyaringi ane tapered mujaho mumukati nekunze mhete dzemabheyaringi.
● Inogona kuve yakakamurwa kuita imwechete mutsara, mitsara yakapetwa uye ina mitsara tapered roller mabhegi zvinoenderana nehuwandu hweanotakura.
● Kukakavara kwakaderera, ruzha, uye kudedera
● Hupenyu hwakareba hwebasa
● Kuvandudzwa kwekuvimbika kwekushanda kunyangwe pazviitiko zvakaoma
● Kumhanya-mukati nenguva ine yakaderera tembiricha nhongonya
● Zvinhu zvinopatsanurika uye zvinotsinhaniswa zvinobatsira kukwidziridza kukwirisa, kubvisa uye kugadzirisa
Chigadzirwa zita taper chinotenderera inobereka
Nemazvo P2 / P4 / P6 / P0
Zvimiro aya mabheyari anoratidzwa neakanyanya muhombe axial mutoro wekutakura huremu uye, zvakadaro, vanogona zvakare kutakura cetain radial mutoro.
Yaiba Chinyorwa Kubereka simbi
Tapered chinotenderera inobereka ainyanya kushandiswa motokari, kemikari michini, kuchera michini pombi, simba chirimwa marasha chigayo simbi, simende, bepa, simbi chigayo mafuta, mota uye mamwe maindasitiri.
Pashure: Yakanaka Hunhu KM NU Series Cylindrical Roller Kubereka NU240ECM
Zvadaro: KM 22232CA Spherical Roller Kubereka